Home » Vaovao momba ny fitaterana » Ny Delhi Metro rafitra fitaterana haingana dia mandefa Wi-Fi maimaim-poana
Free Wi-Fi launched on Delhi Metro rapid transit system
Delhi Metro dia rafitra fitaterana an-tanàn-dehibe miitatra manodidina ny 202 kilaometatra (325 kilometatra), ary mampifandray ny renivohitra Indiana amin'ireo tanànan'ny zanabolana. Ny haben'ny tambajotra fitaterana, ampiasain'ny mpandeha efa ho telo tapitrisa isan'andro, dia mametraka azy io ho isan'ny rafitra metro lehibe indrindra manerantany, ao anatin'izany ireo any London, Shanghai, Beijing, ary New York.
Ary ankehitriny, ny rafitra metro ambanin'ny tany renivohitra Indiana dia nanatevin-daharana ny laharan'ny rafitra metro manolotra Wi-Fi maimaim-poana ho an'ireo mpandeha ao aminy.
Wi-Fi haingam-pandeha maimaim-poana dia natomboka tamin'ny andalana iray ihany hatreto, ny rohy avy ao amin'ny distrikan'ny tanàna mankany Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Indira Gandhi.
Ny serivisy Wi-Fi, ny karazany voalohany tany atsimon'i Azia, dia natolotry ny talen'ny talen'ny fitantanana ny Metro Metro Mangu Singh, ny alakamisy teo. Ny orinasa Rosiana MaximaTelecom, izay nanangana rafitra Wi-Fi mitovy amin'izany ho an'ny Moskoa sy ny St Petersburg metro, no mpifaninana voalohany amin'ny tetik'asa sy mpamatsy teknolojia, na dia orinasa indianina maromaro aza no nanangana ny Internet.